Samuel Kɔɔ so Yɛɛ Nneɛma Pa | Momfa Nkyerɛkyerɛ Mo Mma
Samuel mmofraase pɛɛ na ɔkɔtenaa asɔrefie yɛɛ adwuma. Asɔrefie hɔ na na nkurɔfo kɔsom Yehowa. Wunim nea ɛyɛe a Samuel kɔtenaa asɔrefie hɔ? Nea edi kan no, ma yensua Samuel maame Hanah ho nsɛm.
Ná Hanah fi bere tenten pɛ sɛ ɔwo ba, nanso na onnya bi. Enti ɔbɔɔ mpae srɛɛ Yehowa sɛ ɔmmoa no. Ɔhyɛɛ Yehowa bɔ sɛ sɛ ɔwo ɔbabarima a, ɔbɛma wakɔtena asɔrefie hɔ ayɛ adwuma. Yehowa tiee ne mpaebɔ no, na ɔwoo ɔbabarima. Ɔtoo ne din Samuel. Hanah dii ne bɔhyɛ so, enti bere a Samuel dii mfe abiɛsa anaa anan no, ɔde no kɔɔ asɔrefie hɔ ma ɔkɔsom Onyankopɔn.
Eli na na ɔyɛ ɔsɔfo panyin wɔ asɔrefie hɔ. Ná ne mmabarima baanu nso yɛ adwuma wɔ hɔ. Kae sɛ, na asɔrefie hɔ yɛ baabi a wɔsom Onyankopɔn. Ɛhɔ yɛ baabi a na ɛsɛ sɛ nkurɔfo yɛ adepa. Nanso, na Eli mma no reyɛ nneɛma bɔne paa wɔ hɔ. Samuel huu nea na wɔreyɛ no. So Samuel yɛɛ nneɛma bɔne a na Eli mma no reyɛ no bi?— Dabi, ɔkɔɔ so yɛɛ nneɛma pa sɛnea na n’awofo akyerɛkyerɛ no no.
Sɛ wohwɛ a, dɛn na anka ɛsɛ sɛ Eli yɛ ne mma baanu no?— Anka ɛsɛ sɛ ɔtwe wɔn aso. Ná anka ɛsɛ sɛ ɔma wogyae adwuma a na wɔyɛ wɔ Onyankopɔn fie hɔ no. Nanso, Eli anyɛ saa, enti Yehowa bo fuw ɔno ne ne mma baanu no. Yehowa kae sɛ ɔbɛtwe wɔn aso.
Samuel kaa asɛm a Yehowa ka kyerɛɛ no no kyerɛɛ Eli
Da koro anadwo bi, bere a na Samuel ada no, ɔtee sɛ obi refrɛ no sɛ: ‘Samuel!’ Otuu mmirika kɔɔ Eli hɔ, nanso Eli ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Memfrɛɛ wo.’ Ɔsan tee ɛnne no nea ɛto so abien. Bere a Samuel tee ɛnne no nea ɛto so abiɛsa no, Eli ka kyerɛɛ no sɛ sɛ ɔte ɛnne no bio a, ɔnka sɛ: ‘Yehowa, mepa wo kyɛw, kasa, na meretie.’ Enti Samuel yɛɛ saa. Afei Yehowa ka kyerɛɛ Samuel sɛ: ‘Ka kyerɛ Eli sɛ bɔne a n’abusua no ayɛ nti mɛtwe wɔn aso.’ Sɛ wohwɛ a, so na ɛbɛyɛ mmerɛw ama Samuel sɛ ɔbɛka asɛm yi akyerɛ Eli anaa?— Dabi, na ɛbɛyɛ den. Ɛwom sɛ na Samuel suro de, nanso ɔyɛɛ nea Yehowa ka kyerɛɛ no no. Asɛm a Yehowa kae no baa mu. Wokunkum Eli mma baanu no, na Eli nso wui.
Samuel yɛɛ nhwɛso pa a yebetumi asua. Ɛwom sɛ ohui sɛ nnipa binom reyɛ nneɛma bɔne de, nanso ɔno de, ɔyɛɛ nneɛma pa. Wo nso ɛ? So wubesuasua Samuel, na woakɔ so ayɛ nneɛma pa? Sɛ woyɛ saa a, wobɛma Yehowa ne w’awofo nyinaa ani agye.
Ɛbɔ bɛn na Samuel maame hyɛɛ Yehowa?
Dɛn na Samuel hui sɛ Eli mma no reyɛ wɔ asɔrefie hɔ?
Asɛm bɛn na Yehowa ka kyerɛɛ Samuel sɛ ɔnkɔka?
Nhwɛso pa bɛn na Samuel yɛe a yebetumi asua?